Sharciga Shaqada ee Boqortooyada Midowday - Caawinta Ardayda Bilaashka ah - Adeegyada Macluumaadka Visa
Qof kasta oo ka shaqeeya kana shaqeeya dadka ku nool Mareykanka iyo Boqortooyada Midowday waxaa laga rabaa inay u hogaansamaan shuruuc loo yaqaan sharciga shaqada oo codsi u diro qof kasta oo ku hawlan amaba ku hawlan qofkasta inuu qabto nooc shaqo ah oo ka dhaca gudaha dalkeena. Tan nooca sharciga wuxuu ilaaliyaa halbeeg u dhexeeya ururada shaqaalaha, shaqaalaha iyo loo shaqeeyayaasha si isku mid ah oo xaalado badan ayaa loo isticmaalaa in lagu dhexdhexaadiyo khilaafaadka u dhexeeya dhinacyadaan xagga sharciga.
Arrinta ugu weyn ee Shaqaalaha da'da weyn ayaa ah in takooridda ay inta badan adeegsadaan loo shaqeeyayaasha adduunka oo dhan, si kastaba ha noqotee xaqiiqadu waxay tahay in muwaadiniinta waaweyni ay badiyaaaba la isku halleyn karo, khibrad u leh guud ahaanna ay leeyihiin xirfado isgaadhsiin oo qoto dheer. Nooca noocan ah ee waayo-aragnimada nolosha ayaa mararka qaar ka muhimsan shahaadooyinka leh inta badan shaqooyinka heerka aasaasiga ah, kuwaas oo noqon kara cunsur marka la qorayo.
Sababta aan u aragno sharciga noocan ah ee Boqortooyada Midowday (UK) iyo sidoo kale gudaha Mareykanka ayaa ah in maalmihii ay jirtay ay jirtay baahi loo qabo in lagu dhaqan geliyo xaalado shaqo oo ka sii fiican shaqaalaha maadaama sidii hore aan loo soo saarin sharcigan dad badan oo ka shaqeeya shuruudaha heerka hoose ee waxyeelleyn kara. caafimaadkooda iyo caafimaadkooda. Waxay kaloo xaqiijisay in dadka loosiiyay heerar heersare ah oo loogu talagalay adeegga loo qabtay loo-shaqeeyaha si looga takhaluso takoorka u dhexeeya shakhsiyaadka qaarkood ee qabanaya shaqo isku mid ah. Shaqo kasta oo ka jira Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka maalmahan loo shaqeeyaha waxaa ku waajib ah inuu siinayo qandaraas shaqo oo uu siiyo shaqaalaha sheegaya shuruudaha shaqadooda sida mushaarka, fasaxyada iyo lacagta bukaanka.
Mid ka mid ah isbeddelada ugu dambeeyay ee sharciga shaqada waxaan ku aragnay Boqortooyada Ingiriiska iyo USA waxay ahayd tii mushaharka ugu hooseeya ee qaranka oo la hirgaliyay sanadkii 1998 si loo bixiyo fursado loo wada siman yahay iyo abaalmarin laga bixiyo adeegyadii loo shaqeeye loo qabtay. Mushaharka ugu yar waxaa loo dejiyey si loo hubiyo in qof shaqaale ah aan u isticmaalin loo-shaqeeye maaddaama maalmihii aynnu soo dhaafnay aan aragnay dad aad u tiro badan oo la saaray mushaharka caadiga ah marka loo eego shaqaalaha kale. Koorsada lagu taliyay ee Sharciga guud ahaan si weyn ayaa lagula talinayaa qofkasta oo da 'kasta jira, maadaama aqoonta maadadan ay ka muhiimsan tahay da'da iwm.
Waxaa jira fiidiyow aad u wargelin ah oo ku saabsan Sharciga Shaqaaleynta ee Boqortooyada Midowday, fadlan hoos ka daawo:
Tani waxay si gaar ah u ahayd dadkaas mar dhow yimid dalkeena kuwaas oo lagu qasbay inay u qabtaan shaqo loo-shaqeeye lacag aad u yar marka loo eego mushaharka shaqaalaha hadda jira ee Ingiriiska taasoo aan cadaalad iyo faa'iido toona u lahayn ganacsiga maadaama ay ahayd sababta. ee doodo badan iyo khilaafaad ka dhex dhaca shaqaalaha. Dawladdeenu waxay si sax ah u maleeysay in habka loo adeegsado dadka sidan oo kale ah khalad yahay sidaas darteedna qorshaha ugu hooseeya ee mushaharka loo hirgaliyo si loo ilaaliyo dadkan loona siiyo xuquuq siman dhammaan shaqaalaha iyadoo aan loo eegin dhalashadooda. Waxaan haynaa ilo kale oo loogu talagalay dadka eegaya wax ku barashada UK dhexdeeda.
Sharciga shaqada sidoo kale waxay qarinaysaa dhinacyo badan oo kale iyada oo mid noqoto joojinta qandaraaska shaqaalaha marka loo shaqeeyuhu doonayo inuu ku siiyo adeeggooda sabab kasta ha noqotee. Tani waxay xaqiijineysaa in shaqaalaha la siiyo ogeysiis ku filan sidoo kale hubinta in la siiyo lacagta ay ku shaqeeyaan loo shaqeeyaha taas oo ay kujirto mushahar fasaxa kasta oo loogu talagalay. Mid ka mid ah noocyada ugu badan ee loo adeegsado sharciga shaqooyinka maalmahan ayaa ah kuwa shaqaalaha dareemaya in si xun loola dhaqmay ama lagu dhibaateeyay goobta shaqada maadaama tani sharciga uu yahay mid gebi ahaanba aan loo dulqaadan karin. Dacwado badan sanad walba waxay aadaan maxkamada halka shaqaaluhu ku helo dhamaadka dhamaadka si xun loola dhaqmay ama si aan xaq ahayn looga faa'iidaystay shaqooyinkooda. Fiiri wararkii ugu dambeeyay ee Visa News qaybta wararkayaga halkan.
Kiisaskaas waxaa ka mid ah arrimo ay ka mid yihiin kadeedka galmada, xoogsheegashada iyo sidoo kale arrimaha halka lacagaha lagu leeyahay loo-shaqeeyuhu u leeyahay shakhsiga. Sharciga shaqadu wuxuu kaloo hubiyaa in shaqaalaha aan lagu qasbin inay shaqeeyaan saacado xad dhaaf ah maadaama aan leenahay jihaynta waqtiga shaqada ee kacaanka taas oo hubineysa inaan shaqaalaha lagu qasbi karin inay shaqeeyaan wax ka badan 48 saacadood usbuucii haddii aysan diyaar u ahayn inay sidaas sameeyaan mooyee. Tani waa faa iido weyn maxaa yeelay shaqaale badan ayaa lagu qasbay inay shaqeeyaan saacado dheeri ah mushahar isku mid ah oo labaduba aan caddaalad ahayn oo dhaawici kara caafimaadka. Sharciga shaqadu waa noocyo fara badan oo sharci ah waxaananu kugula talineynaa haddii aad dhib ku qabtid arrimo shaqo oo aad booqato bogga ugu wanaagsan ee aan hoos ku taxnay.
Kheyraadka dheeraadka ah ee xaaladaada: Bogga Kheyraadka ACAS
Loogu Xaqiijiyay Badbaadinta McAfee